Voarohirohy ho mpamatsy fitaovam-piadiana ny dahalo: Apostoly 150 mitaky ny hamoahana ny namany | NewsMada
Tranga tsy dia fahita firy ity niseho tao amin’ny fitsarana ao Fianarantsoa ity, omaly. Nilahatra nilanja sorabaventy motaky ny hamoahana ny namany ireo apostoly maherin’ny 150 any ho any. Voarohirohy amin’ny firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo ireo namany roa lahy ireo.
Nahavariana olona maro ny nahatongavan’ireo apostoly manodidina ny 150 mahery teo anoloan’ny fitsarana ao Fianarantsoa, omaly. “Mitaky ny hamotsorana tsy misy hataka andro ny namany miisa roa vaorohirohy amin’ny firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo izy ireo”, hoy ny kaomandin’ny kaompanian’ny zandary ao Matsiatra Ambony, Lietnà Kly Randriampeno Samy. Voasambotry ny borigadin’Isorana andro vitsy lasa tao amin’ny tanànan’i Soatanana, izay ao anatin’ny faritra Matsiatra Ambony izy roa lahy ireo. Natao ny famotorana ka natolotra ny fitsarana ny raharaha satria fantatra fa voarohirohy ho anisan’ny mamatsy fitaovam-piadiana ireo dahalo ao amin’io faritra io izy ireo. Tetsy an-kilany, mitsipaka tanteraka io tondro molotra mahasaringotra ny naman’izy ireo io ireo mponina ao Soatanana ka tonga nitaky ny famotsorana azy ireo.
Mbola notanana izy mirahalahy…
“Tsy mbola vita ny fitsarana ka voatery notanana hatrany ireo roa lahy vaorohirohy ireo”, hoy ny Lietnà Kly Randriampeno Samy. Tsy tanteraka, araka izany, ny fangatahan’ny fianakavian’ireto voasaringotra ireto fa miandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ao an-toerana raha toa ka meloka na tsy ny zanak’izy ireo. Marihina fa zanaky ny filoha nasionalin’ny Fiangonana ao Soatanana ireo roa lahy niakatra fampanoavana omaly ireo. Andrasana noho izany ny fivoaran’ny toe-draharaha any an-toerana.